တစ်ယောက်တည်းပါ။ဒါပေမဲ့အထီးမကျန်ပါဘူး။အကောင်းဆုံးအဖော်ဖြစ်တဲ့ မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားဓမ္မများနဲ. မိဘဆရာသမားများရဲ့ဆုံးမစကားတွေဟာ ကျွန်မရဲ့အဖော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မဖေဖေရဲ့ဆုံးမစကားလေးကိုစာ
Posted by မြန်မာပြည်ကိုလွမ်းတယ် at 22:48
ရွှေပြည်သူ3April 2008 at 23:08
သူငယ်ချင်းအဖေရဲ့ ဆုံးမစကားတွေက တန်ဖိုးရှိလိုက်တာ။ မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါပဲ သူငယ်ချင်းရေ။ ဖတ်ရင်းနဲ့ ကိုယ့်အဖေ့ကို သတိရလာမိပါတယ်...
Anonymous3April 2008 at 23:50
မောင်အညတရ4April 2008 at 01:40
မေမိုးမခ4April 2008 at 09:03
ဆုံးမစကားတွေကို ဝေမျှပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပဲ သူငယ်ချင်းရေ။ အဖေ၊အမေနဲ့ ငယ်ငယ်လေး ကတည့်က အတူမနေရဘူး ဒီဆုံးမစာကို ဖတ်ပြီးတော့ ငိုတောင်ငိုချင်မိတယ် ဒီစာဖတ်ရတာဝမ်းသာပါတယ် အားပေးလျက်ပါ
Nyein Chan Aung4April 2008 at 09:49
နွေမုန်တိုင်း4April 2008 at 12:24
နင်က ဒါမျိုးတွေလည်းရသားပဲဟ :D